Sheegashada Burburka Buundada Bosphorus ee Magaalada Istanbul Kadib Dhulgariir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSheegashada Burburka Buundada Bosphorus Ka dib Dhulgariirkii ka dhacay Istanbul
26 / 09 / 2019 34 Istanbul, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Sheegashada burburka buundada hunguriga kadib dhulgariirkii ka dhacay Istanbul
IMMoglu Ekrem Imamoglu, dhulgariir Silivri ku saleysan kadib cabirka 5.8 AKOM'a ayaa dhaafay. Imamoglu, oo raba inuu dhaafo muwaadiniinta reer Istanbul iyo magaalooyinka ku xeeran, ayaa sheegay in dhulgariirku uu digniin u yahay. Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay in dhulgariirku uu yahay arin qaran oo ay tahay in la abaabulo oo wuxuu yiri, "Magaalada Istanbul, waxaan aqoonsan aag dhul uruurineed oo cusub oo ka badan 800 bishii ugu dambeysay ee 1. Way jiraan diyaar, ma jiraan. Waxaan qaban doonnaa hawshooda diyaarinta. Kuwaas badankood waxay ku yaalliin degmooyinka dhexe ee Istanbul. Mitiryada ugu yar ee laba jibaaran '500' oo ku yaal badhtamaha magaalada Istanbul, natiijooyinkan ayaa dhab ahaan baabi'in doona baahi weyn. ” Imamoglu wuxuu sheegay in sawirada ku saabsan buundada Bosphorus ee warbaahinta bulshada aysan ka turjumaynin runta, sidaa darteed aan ku wareejino macluumaad badan oo ku saabsan buundada Bosphorus. Wadooyinka waaween wareysi lala yeeshay. Waxaa jiray duuliye. Sawirka duuliyahaas wuxuu u arkaa inay wax u qaldan yihiin. Dhibaato malahan. Scaffolding sidoo kale waa la saarayaa. Haddii dhibaato jirto, waxaan la socodsiin doonnaa muwaadiniinteenna halkan ”.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Istanbul ee Magaalo Weyn (IMM), ayaa ku neefsaday Xarunta Iskuxirka Masiibooyinka (AKOM) kadib dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.8 oo ka dhacay Silivri, kaasoo sababay cabsi ka jirta Istanbul iyo magaalooyinka ku xeeran. Imamoglu wuxuu la wadaagaa macluumaadkii ugu horreeyay ee uu ka helo xubnaha saxaafadda, 2 wuxuu sameeyay bayaan ka duwan. Imamoglu ayaa bayaankiisii ​​ugu horreeyay ku yidhi:
WAA INAAD AANAN LAHAYN IN AAD LAGUGU JIRO ”
Siliv Waxaan la kulantay dhulgariir cabirkiisu yahay 13.59, saacad buuxda oo ah 5.8 oo ka baxsan Silivri meel ka baxsan Badda Marmara. Waxaan u rajeynayaa dhamaan asxaabteyda kale ee reer Istanbul inay dhaafaan. Waxaan joognaa Xarunta Isku-duwaha Masiibooyinka ee loo yaqaan 'IOM. Ilaahay baa mahad leh wax khasaare nafeed ah maleh. Ma jiraan dhaawacyo halis ah oo la soo sheegay. Waxaan helnay xoogaa ogeysiis ah dhismayaasha. Avcılar iyo Sarıyer 2 minarets ee qeybaha sare ee fekerka duminta dhismayaasha ka baxsan tipping-ka waxay ahaayeen kuwo aan sal iyo raad lahayn. Kuwani waa wararka na farxad gelinaya. Dhulgariirku waa xaqiiq Istanbul iyo dabeecad ahaan. Waxaan wada ognahay in dhulgariirku uusan dilin dadka kaligiis, laakiin dayaca ayaa dila. Dhibaatooyinka dhismayaasha aan diyaar u ahayn dhulgariirrada ayaa keena dhimashada. Eebbe ha idmo. Waxaan rajeynayaa inaan si wadajir ah uga wada shaqeyn doonno Istanbul. ”
"WAAN KA IMAN KARTAA IMTIXAANKA FARSAMADA"
Waxaan u maleynaynaa inaan dhamaanteen ka wada feejignaano dhulgariirkii dhacay sanadki 20, laakiin nasiibdarro tirada dhismayaasha khatarta leh ee ku sugan Istanbul ayaa na wada qalqal gelineysa. Tani waa mid ka mid ah howlihii aan bilownay isla markii aan xafiiska la wareegey. Waxaan cadeeyay in abaabulku uu yahay arin wadani ah, in aan wada fariisano oo aan ka wada hadalno howshan isla markaana aan sameysano howshan oo leh heerarka ugu sareeya ee degmadeena iyo gobolkeena anigoon sameyn wax tanaasulin ah. Maanta waxaan isla joognaa isla mawqifkeenna. Dabcan waxaan sameyn doonaa isku diyaarintaan. Waxaan horumarin doonaa wacyiga musiibada. Waxaan qaadnaa tababar culus. Waxaan soo gabagabeynaynaa arjiga si aan u diyaarinno goobta diyaargarowga aafada ee Istanbul. Magaalada Istanbul, waxaan ku aragnay aag aruurinta dhulgariir cusub oo ka badan 800 bilihii ugu dambeeyay ee 1. Way jiraan diyaar, ma jiraan. Waxaan qaban doonnaa hawshooda diyaarinta. Intooda badan waxay ku sugan yihiin bartamaha dhexe ee Istanbul ilaa ay gaarayaan Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy iyo Üsküdar. ”
IZ WAA INAAN HELAY Digniinta Adag ”
Maanta waxaan helnay digniin culus. Annaga ayaa mas'uul ka ah qiimeynta digniintani ee qaranku sameeyay. Cidna kama shaki qabno inaan annaga oo ah IMA-ga, ku fulin doonno howlaheenna go'aan adag. Waxaan hadda si feejigan ula socona dhamaan asxaabteena AKOM. Isla mar ahaantaana, ha ahaato IGDAS, ISKI ama kuwa kale ee xiriirka la leh, waxaan diyaar u nahay inaan faragalin ku sameeyno geedi socodka gebi ahaanba. Waxaan la yeelan doonnaa asxaabteyda kulamada ku saabsan horumarka iyo khubarada ku saabsan dhulgariirka. Markaasaan kula kulmi doonaa oo kuu sheegi doonaa.
KUma aan imaan Ujeeddada SATISFACING LEVEL ee ku saabsan isku-xirnaanta ganacsiga "
İmamoğlu wuxuu kaloo la wadaagay macluumaadka soo socda bayaankiisii ​​labaad ee AKOM:
Imiz Hadafkeenu waa sii socdaa. Ugu dambayntii, ma hayno waxyeello naxdin leh oo na soo gaarta. Qaar ka mid ah ogeysiiska ku saabsan dhismayaasha ayaan sal lahayn oo kooxahayaga qaarkood waxay ka shaqeeyaan garoonka. İSKİ iyo İGDAŞ kooxaha iyaguna garoonka ayey ku jiraan. Kooxda SCADA waxay sii wadaysaa inay raacdo garoonka. Waxaan taxaddar ku sameynaa annaga oo jaray gaaska guryaha khatarta leh. Waxaan dadweynaha u sheegi doonnaa natiijooyinka cad ee aan helnay. Tani waa digniin muhiim noo ah. Istanbul, 17 Agoosto Kadib dhulgariirkii 1999, go'aankii lagula dagaallamayo dhulgariirku waa la muujiyay, laakiin nasiibdarro maanaan gaarin heer ku habboon sanadihii 20. Dhulgariirku waa mushkilad qaran oo magaaladeena iyo dalkeena haysata. Sidaa darteed, qof walba waa inuu isu imaadaa si uu u soo saaro fikradaha, xallinta dhibaatada, uu qaado tillaabooyin ku saabsan arrintan. Degmooyinka, dowladda dhexe, qof walbaa wuxuu ubaahanyahay inuu masuuliyada qaado. Waa aag aan horay u soo marnay. Markiiba waxaan nidhi waa inaan fadhiisno oo aan miiska la hadalno
"WAXAAN U BAAHAN TAHAY"
Waxaan ku baraarugsanahay xaqiiqda inaan ku qasban nahay inaan si dhaqso leh keenno aagag aruurinta dhulgariir dhowaan la keenay Istanbul. Mitiryada ugu yar ee laba-jibaaran ee 500 ee bartamaha magaalada Istanbul, natiijooyinkan ayaa dhab ahaan baabi'in doona maqnaanshaha weyn. Intaa waxa u dheer, waxa loo baahan yahay isbeddel buuxa oo maskaxeed marka loo eego dhab ahaantii xoojinta dhismayaasha iyo dib-u-cusboonaysiinta magaalooyinka. Waxaan diyaar u nahay arintaan. Mar labaad haddii ay dhacdo musiibo, waxaan u baahan nahay tababar xaqiijin doonta inaan u diyaarsanahay heerka ugu sarreeya. Diyaargarowga arintan waa mid cad. Annaga oo kaashanayna iskuulada iyo dhamaan xarumaha dowliga ah, waxaan soo bandhigi doonnaa dadaalkeena si aan kor ugu qaadno wacyiga bulshada oo dhan. Waxaan la wadaagi doonnaa codsi degganeyaasha Istanbul anagoo matalayna dhulgariir diyaarsan oo ka socda Istanbul. Tani waa diyaar. Waqti lumis la'aan, oo aan seegin ilbiriqsiyo, waa iska cadahay inaan soo saarno daaweyn haddii aan tixgelinno dhulgariirka. ”
“IOM THAILAND UZ
Iz Waxaan hada joognaa AKOM. Gaar ahaan waxaan la kulmay dhamaan badhasaabyada degmooyinka ku teedsan xeebta dhinaca Yurub. Halkan waxaan ku sii wadnaa go'aamadeena. Waxaan sidoo kale la kulannaa Guddoomiyahayaga. Waxaan hubineynaa in howshu ku shaqeyneyso habka ugu caafimaadka badan qulqulka macluumaadka ka yimaada labadaba AFAD iyo anaga. IMM heegganimo Waxaan u joogi doonnaa si aan wax uga qabano baahiyaha muwaadiniinteenna anagoo u dirayna buugaag moobiil meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Khubarada ayaa ka shaqeynaya arrintan. Waan ognahay inay jirto daraasad lagu sameeyo Kandilli. Waxaan dadweynaha ku wargalin doonnaa si kasta oo loo eego. Khubaradeenna dhulgariirku waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan maaddada. ”
“Dhulgariirku waa taariikhda ISTANBULKA iyo dabeecadda”
Im Maaddaama ay jiraan macluumaad badan oo ku saabsan Buundada Bosphorus, aan soo qaadanno. Wadooyinka waaween wareysi lala yeeshay. Waxaa jiray duuliye. Sawirka duuliyahaas wuxuu u arkaa inay u egtahay inay dhibaato halkaa ka jirto. Dhibaato malahan. Scaffolding sidoo kale waa la saarayaa. Haddii dhibaato jirto, waxaan ku wargalin doonaa muwaadiniinteenna halkan. Ka gudub. Sidii aan sheegay, waxaan qaadi doonnaa tallaabooyinka ugu aasaasiga ah ee lagu xallinayo dhulgariirkii ka dhacay Istanbul. Dhulgariirkii weynaa waa masiirka magaalada Istanbul iyo dabeecadda. Waxaan rajeynayaa inaan xallin karno dhibaatooyinka Istanbul anoo aan la kulmin. Aynu wada tagno.
Marmaray Furitaanka Buundada Bosphorus
3. Ka shaqeeya Boosaasta Bosphorus
Ardayda Hdii 3. Bosphorus Bridge
3. Xaaladda hadda jirta ee Bosphorus Bridge (Video - Photo Gallery)
Shaqo La'aanta Boosaasta Boosaasta ah ee Boorama (Video)
Waxyeello u gaarta khadka taraamka ee Konya
Dayactirka Tareenka Dhimashada ee Dörtyol Shil
Isgoysyada Magaalooyinka ayaa burburay guryaha
Tareenka iyo Roogagga Burburka ku dhacay oo lagu dhaawacay Wan (Sawir Sawir)
Dhul gariirkii ka dhacay Istanbul
Sidee ayuu u dhul gariirki dhacay Istanbul
Fardo waxaa laga soo qaatay Gawaarida ku taal Beerta Duurjoogta ee Izmir
Maanta Taariikhda: 27 Safarka Saddexaad Sebtembar ee Mashruuca Tareenka 2017 BTK